Home Wararka Madaxweynaha Somaliland oo la kulmay Ergada dhex-dhexaadinta
Madaxweynaha Somaliland oo la kulmay Ergada dhex-dhexaadinta
Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu maanta la kulmay ergadii iskood isku xilqaamay ee ku howlanaa sidii ay isugu soo dhaweyn lahaayeen xukuumadda iyo asxaabta mucaaradka.
Ergadan ku howlan xal u helidda arrimaha siyaasadeed ee cakiran ee Somaliland ayaa hore waxa ay ula kulmeen madaxda mucaaradka.
Ergadan waxa ay sheegeen inay qaadeen tallaaba muhiim ah oo ay dhinacyadu isugu soo dhawaynayaan, hasayeeshee qoraal ka soo baxay madaxtooyada Somaliland ayaa lagu sheegay in Golaha Guurtida ay sharci ahaan Somaliland u qaabilsayihiin xallinta khilaafka, iyagana ay tahay in laga war-sugo qaabka loo galayo hawsha.
Previous articleDeni & Karaash oo heshiis ka gaaray Khilaafkii siyaasadeed
Next articleRooble oo Maanta guddoomiyay shirkiisii ugu dambeeyay ee Golaha Wasiirrada
Wariye C/maalik Coldoon oo loo dhiibtay Dowlada Itoobiya!!
HirShabelle oo oo joojisay DIBAD-BAX lagu taageeri lahaa DF Soomaaliya